Senator Prof Dufle “Ka Baarlamaan ahaan waxaan balan-qaadeynaa sidii dadka danyarta ah ay u heli lahaayeen adeeg Caafimaad oo dhammeystiran” – Kalfadhi
Senator Prof Dufle “Ka Baarlamaan ahaan waxaan balan-qaadeynaa sidii dadka danyarta ah ay u heli lahaayeen adeeg Caafimaad oo dhammeystiran”
December 13, 2020 Hassan Istiila
Magaalada Mogadishu shalay waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee Yoolka Caafimaadka loo dhan yahay, taasoo ay soo qaban-qaabisay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo kaashaneysa hey’adda Caafimaadka aduunka ee (WHO).
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur, Xildhibaanno, xubno ka socday WHO, khubaro Caafimaad iyo marti sharaf kale ayaa sidoo ka qeyb-galay xuskan oo runtii ah mid dunida oo dhan laga weyneeyo sanad kasta maanta oo kale.
Ujeedada xuska maalintan waxay aheyd hiigsiga sidii bulshada yar iyo weyn, Sabool iyo taajir ay u heli lahaayeen adeeg Caafimaad oo dhammeystiran, iyadoo xoogga la saarayo mar walba dadka danyarta ah, gaar ahaan kuwo jilicsan sida caruurta iyo haweenka oo dalkeena marka la fiiriyo xaaladooda aan ognahay sida ay u hooseyso.
“Ka Baarlamaan ahaan waxaan balan-qaadeynaa, diyaarna u nahay inaan ka shaqeyno, una ololeyno sidii dadka danyarta ah ay u heli lahaayeen adeeg Caafimaad oo dhammeystiran, waana waajib na saaran. Waxaana bogaadinayaa Wasaarada Caafimaadka iyo heyadda WHO oo munaasabadan wadajir u soo qaban-qaabiyey, iyo dhammaan dadkii kale ee gacanta ka geystay”, ayuu yiri Senator Cusmaan Dufle oo kamid ahaa martidii khudbadaha ka jeediyay xuska.
Golaha Shacabka oo maanta akhrinta koowaad marsiiyay miisaaniyadda sannadka 2021
Xildhibaan Fowsiya Yuusuf oo sheegtay in safaarraha Soomaaliya musharaadkooda ay helaan 15-ka bisha